I-Pros ne-Conserv ye-Majoring kwi-Journalism
Ngoko uqala iikholejini (okanye ubuyela emva emva kokusebenza kancinane) kwaye ufuna ukuphinda uphumelele umsebenzi weendaba . Ngaba unokubaluleka kwi-journalism? Thatha izifundo ezimbalwa ze-journalism uze ufumane idijithi kwenye into? Okanye i-steer ecacileyo ye-j-isikolo ngokupheleleyo?
Ukufumana iSigqeba soLwazi lweMbali-I-Pros
Ngokubalulekileyo kwi-journalism ufumana isiseko esisisiseko kwizakhono ezisisiseko zorhwebo . Ufumana ukufikelela kwiinkalo ezizodwa zemfundo yezobugcisa.
Ngaba ufuna ukuba ngumdlali wezemidlalo ? Umgxeki wefilimu ? Uninzi lwezikolo ze-j zinika iiklasi ezizodwa kule mimandla. Uninzi luphinde luhlinzeke ngoqeqesho oluthile lwezakhono ze-multimedia eziya kuba zifuna. Abaninzi banakho neeprogram ze-internship kubafundi babo.
Ukuxhaswa kwi-journalism kukunika ufikelelo kubacebisi, oko kukuthi i -faculty ye-j-school , esebenze kulo msebenzi kwaye unokunika iingcebiso ezixabisekileyo. Kwaye ekubeni izikolo ezininzi zibandakanya i-faculty abasebenza iincwadana zentatheli, uya kuba nethuba lokunxibelelana nabaqeqeshi endle.
Ukufumana iSigqeba soBugcisa-uLwazi lweMbali
Abaninzi kwiindaba zoshishino baya kukuxelela ukuba izakhono ezisisiseko zokunika ingxelo , ukubhala kunye nodliwano-ndlebe zifunyenwe kakuhle kwiziko lokufundela, kodwa ngokubambisa amabali ayenene kwiphephandaba lekholeji. Yiloo ndlela ininzi inzululwazi efunde ngayo imveliso yabo, kwaye ngokwenene, ezinye zeenkwenkwezi ezinkulu kwi-shishini azizange zithathe inkambo yezentengiso ebomini babo.
Kwakhona, intatheli ziyacelwa ukuba zingabi nje ukuba zibe ngabanyathelisi abalungileyo nabalobi, kodwa ukuba zibe nolwazi olukhethekileyo kwintsimi ethile. Ngoko ngokufumana isicatshulwa seendaba, unokuba lunciphisa ithuba lokukwenza oko, ngaphandle kokuba uceba ukuya esikolweni.
Makhe sithi iphupha lakho libe ngumthunywa welizwe langaphandle eFransi.
Uninzi luya kuthetha ukuba uya kulungiswa ngakumbi ngokufunda isiFrentshi ulwimi kunye nenkcubeko ngelixa uthabatha izakhono zamaphephandaba ezifunekayo endleleni. Enyanisweni, uTom, umhlobo wam owaba ngumthunywa weMoscow we -Associated Press wenza oko nje: Waziphakamisa kwizifundo zaseRussia kwiikholeji, kodwa wafaka ixesha elininzi kwiphepha lomfundi, wakha izakhono zakhe kunye nepotowfolio yakhe.
Ngokuqinisekileyo, akufuneki ukuba yinto yonke okanye akukho nto. Unokufumana inkunzi ebalulekileyo kwi-journalism nakwezinye izinto. Ungathatha nje izifundo ezimbalwa zeendaba. Kwaye kusoloko kusesikolweni esikolweni.
Ekugqibeleni, kufuneka ufumane isicwangciso esisebenza kuwe. Ukuba ufuna ukufikelela kuyo yonke into eyenziwa sisikolo soburhulumenteni (abacebisi, izifundo, njl njl njl njl.) Kwaye ufuna ukuthatha ixesha elide lokuzithengisa izakhono zakho zentengiso, ngoko-yesikolo-j kuwe.
Kodwa ukuba ucinga ukuba unokufunda ukuphendula nokubhala ngokusuka kwinqanaba lokuqala, mhlawumbi nge-freelancing okanye ukusebenza kwiphepha labafundi, ngoko unokuthi ulunge ngakumbi xa ufundela izakhono zakho zokubhala kwi-post-job-and-domining into into epheleleyo.
Ngoobani abasebenzisa ngakumbi?
Konke kuya kwele ndawo: Ngubani na ofumana ithuba lokufumana umsebenzi weendaba emva kokugqitywa, umcimbi omkhulu okanye umntu onesidanga kwenye indawo?
Ngokuqhelekileyo, izilwanyana zesikolo ze-j zingakufumana lula ukuba umhlaba ufunde umsebenzi wokuqala kwiikholeji. Kungenxa yokuba isigidimi sogqithiselo sinika abaqeshi ingqiqo yokuba isiqu sele sifunde izakhono ezisisiseko zobugcisa.
Ngakolunye uhlangothi, njengoko intatheli ziqhubela phambili kwimisebenzi yazo kwaye ziqala ukufuna imisebenzi engakumbi kunye nemisebenzi ehloniphekileyo, abaninzi bafumanisa ukuba idideji kwindawo engaphandle kwe-journalism ibanika umlenze uphakamileyo (njengomhlobo wam Tom, ngesiRashiya).
Beka enye indlela, ixesha elide usebenze kwiindaba zoshishino, ngaphantsi kweyona nkqubela ye-college. Okubaluleke kakhulu kwilo xesha kulwazi lwakho kunye namava emisebenzi.
Indlela yokubopha kunye nokusebenzisa i-Autoblock Knot
Imfazwe yaseFransi neyamaNdiya: I-Field Marshal Jeffery Amherst
Imfundo ekhethekileyo: Ngaba ufanelekile?
10 Iinkcukacha NgeeTurtles kunye neziThuthi
Elin Nordegren Iifoto